Review for the Section of the GED
Ny Fahaizan'ny GED, na ny Fandrindrana ny Fandrosoana ankapobeny, dia raisina any Etazonia na Kanada mba hampisehoana ny fahaiza-manaon'ny academique amin'ny ambaratonga ambony. Ny fanadinana dia matetika no raisin'ireo olona izay tsy nahavita fianarana ambony na nahazo diplaoma ambony. Ny fandoavana ny GED dia manome mari-pahaizana diplomaty iray (antsoina hoe GED). Ny fizarana iray ao amin'ny GED dia mirakitra ny siansa, anisan'izany ny simia. Ny fitsapana dia safidy marobe, mifanaraka amin'ny hevitra avy amin'ireto sehatra manaraka ireto:
Ny rafitry ny olana
Ny Chemistry of Life
Fanehoan-kevitra momba ny simika
Ny singa rehetra dia misy olana . Ny zava-manahirana dia zavatra iray izay misy volany ary mitaky toerana. Misy foto-kevitra manan-danja tokony hotadidina momba ny raharaha:
Matter misy iray na maromaro amin'ireo singa manan-danja mihoatra ny 92.
Ny singa tsirairay dia fitaovana madio, izay misy karazana atoma iray monja.
Ny atoma dia misy karazana karazana telo: protons , neutrons , ary electrons . Ny atoma dia tsy mila manana ampahany telo, fa misy foana ny protons farafaharatsiny.
Ny elektrôna dia misy voka-dratsiny miampita, ny protons dia manana fiantohana tsara, ary tsy manana fiantohana herinaratra ny neutrons .
Ny atoma dia manana fotony anaty antsoina hoe nucleus , izay toerana misy ny protons sy ny neutrons. Ny elon-koditra mandehandeha manodidina ny ivelany.
Tafika roa lehibe no mitazona ny atôma. Ny hery herinaratra dia mitazona ny elon-koditra eny amin'ny manodidina ny kernel. Manintona ny fiampangany, noho izany dia voasariky ny ody am-bava ireo elektronita. Ny hery nokleary dia mitazona ny protons sy ny neutrons ao anatin'ny sehatra.
The Table Periodic Table
Ny latabatra fampahafantarana dia tabilao izay mandrindra ny singa simika. Ireo singa ireo dia sokajiana araka ireto toetra manaraka ireto:
Toetran'ny atomika - isa ny protons ao amin'ny nosy
Ny atmosfera - ny isa ny isan'ny protons miampy ny neutrons ao amin'ny nosy
Vondrona - tsanganana na tsanganana maromaro eo amin'ny latabatra. Ireo singa ao amin'ny vondrona dia mizara vondrona simika sy ara-batana mitovy.
Fe-potoana - andalana avy eo ankavia miankavanana eo amin'ny latabatra. Ireo singa ao anatin'ny fe-potoana dia mitovy ny angom-pahefan'ny angovo.
Azo avy amin'ny endriky ny singa madio ny toe-javatra, saingy ny marika iombonana dia miavaka kokoa.
Ny molekiola - molekiola dia singa misy atôma roa na maromaro (mety ho avy amin'ny singa iray mitovy na samihafa, toy ny H2 na H2O)
Ny singa - ny fitambarana dia singa misy singa roa na mihoatra mifangaro. Amin'ny ankapobeny, ny singa dia heverina ho toy ny subclass of molecules (ny olona sasany dia hiady hevitra fa voafaritra amin'ny karazana fifamatorana simika).
Ny fomba fiasa ara-tsimia dia fomba fohy mampiseho ny singa hita ao amin'ny molekule / ny fitambarana ary ny fifandraisan'izy ireo. Ohatra, ny H2O, ilay karazam-borona momba ny rano, dia mampiseho fa ny atôma roa dia mifamahofaho miaraka amin'ny atomin'ny oksizenina mba hamorona molekilan'ny rano.
Mifamatotra ny atôma ny fifamatorana.
Ionic Bond - dia miforona rehefa alefan'ny elektronika avy amin'ny atoma iray mankany amin'ny iray hafa
Ny Covalent Bond - izay miforona rehefa atoma roa no mizara elektronika iray na mihoatra
Ny fiainana eto an-tany dia miankina amin'ny singa kôkôla simika, izay eo amin'ny zava-manan'aina rehetra. Tena zava-dehibe tokoa ny karba, izany no fototry ny sampana roa amin'ny simia, chimique organika sy bio-chemistry.
Ny GED dia manantena anao ny hahalalana ireto teny manaraka ireto:
Ny hydrocarbons - molekiola izay ahitana ihany ny singa karbaona sy hydrogène (oh: CH4 dia hydrocarbon raha tsy CO2 kosa)
Organic - dia manondro ny simia misy zavamananaina, izay ahitana ny singa karbaona
Ny Organ Chemistry - ny fandinihana ny simia amin'ny fambolena karbona misy eo amin'ny fiainana (toy ny diamondra, izay karazana karbôlina, dia tsy tafiditra ao amin'ny chimique organika, fa ny fandinihana ny fomba famokarana metana dia rakotry ny chemema organika)
Molecules organiques - molekiola misy atôma karbôna mifamatotra amin'ny tsipika (karbôna karbônina) na ao anaty peratra boribory (kôlômbia)
Polymer - hydrocarbons izay mifamory miaraka
Ny foto-kevitra tsirairay dia manana ny simika sy ny vatana.
Ny fe-potoana misy ny zavatra tokony ho fantatrao dia:
Solid - ny solama dia manana endrika sy volavolam-paty
Rano - Flux manana volom-borona miavaka saingy afaka manova endrika
Gas - afaka miova ny endrika sy volan'ny gazy
Ireo dingana ireo dia afaka miova avy amin'ny tsirairay. Tadidio ny famaritana ny dingana manaraka:
Ny famonoana - mitranga ny fivoahana rehefa miova ny vatana amin'ny solika mankany amin'ny rano
Ny fanotanina - ny fofona dia rehefa manova zavatra avy amin'ny rano mankany amin'ny entona ny vatana
Ny fampangatsiahana - ny fimailo dia rehefa miova amin'ny ranomainty ny gazy
Ny fanamafisana - ny mangatsiaka dia ny fiovana amin'ny toerany
Fiovana ara-batana sy fiovana
Ny fiovana natao tamin'ny voka-dratsiny dia azo sokajiana ho an'ny kilasy roa:
Ny fiovana ara-batana - dia tsy mamokatra zava-maniry vaovao (ohatra: fiovan'ny toetr'andro, manimba zavatra)
Ny fiovaovan'ny toetrandro - dia mamokatra zava-maniry vaovao (ohatra, mirehitra, mikotrika, photosynthesis)
Vahaolana vahaolana amin'ny fampifangaroana zavatra roa na maromaro. Ny famoronana vahaolana dia mety hamokatra fiovana ara-batana na simika. Azonao atao ny milaza azy ireo amin'ireto fomba ireto:
Ireo vatana voalohany dia azo zaraina raha toa ka mamokatra fiovana ara-batana fotsiny ilay vahaolana.
Ireo singa voalohany dia tsy azo ovàna raha tsy misy fiovana simika.
Ny fanehoan-kevitra momba ny simika dia ny dingana izay mitranga rehefa mifangaro ny singa roa na maromaro mba hamokarana fiovan'ny simika. Ny fepetra manan-danja tokony ho tsaroanao dia:
Ny fitambaran'ny simika - nomena ny tsindrimandry nampiasaina mba hamaritana ny dingana amin'ny fihetsiky ny simika
mpananatra - ny fitaovana fanombohana ho an'ny fihetsiketsehana simika; Ny votoatin'ny fikambanana
vokatra - ireo akora izay natsangana vokatry ny fihetsiky ny simika
ny tahan'ny fitiliana simika - ny haingam-pandeha izay misy fihetsiketsehana simika
ny angom-pahefana ety ivelany - ny angovo avy any ivelan'ny toeram-pitsaboana izay tsy maintsy ampidirina mba hisian'ny fanehoan-kevitra momba ny simika
Catalyst - votoaty izay manampy amin'ny fanehoan-kevitra momba ny simika (manamaivana ny angon- drivotra ), fa tsy mandray anjara amin'ny fanehoan-tena
Lalàn'ny Fiarovana ny Lamesa - ity lalàna ity dia milaza fa ny zava-misy dia tsy noforonina na potika tamin'ny fihetsiky ny simika. Ny isan'ny atôma mitaona amin'ny fihetsiketsehana simika dia mitovy amin'ny isan'ny atoma vokatra.
Fossil Picture Gallery
Famaritana ny sela Galvanika (Cell Voltaic)
Sary avy amin'ny Chemicals
Inona no mahatonga ny atidoha?
Top Weather Songs of the 1960's
Ahoana no fomba fiasa mihetsika?
Ahoana ny famerenana ny angady amin'ny nanômetôs
Inona no mahatonga ny Muggy Weather?
Inona no atao hoe Synchrotron?
Inona no atao hoe rivotra?
6 Fomba mahavariana momba ny lamba matevina
Prodigy sy Protégé
Fifadian-kanina, fivavahana ary fombam-pivavahana Hindu mahazatra
Sonnet 18 - Study Guide
Ny Fahamarinana, nataon'i Francis Bacon
Ambany SAT na ACT? Hamarino ireo fiaraha-mianatra fakan-kevitra ireo
Fifidianana Amerikana sy ny maha-zava-dehibe azy ireo
Famaritana ny endriky ny alkaola sy ny formula
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Angletera
Famaritana sy ohatra ohatra amin'ny Parison
Teleology et Ethics: Akany sy ny vokany
Fomba 12 ahafahan'i Batman manaisotra ny mpanohitra
Fandraisana anjorom-bahoakan'i Oregon
Fantatrao ve? - Fakan-drivotra mahomby
Firaisana Syriana fahiny, tantara sy geolojika
Mianara momba ny olona taloha sy ankehitriny
Valkyrie: Ny teboka fandatsaham-bato tamin'ny volana jolay mba hamonoana an'i Hitler
Ny fomba fanaovana ilay tifitra dia mitazam-pandehanana
Bright Vehicle Weight Rating
Bigfoot Encounters - Tantara Marina
Ahoana no hamaritan'ny manam-pahaizana ny toro lalana momba ny fanambarana
Torohevitra momba ny fampiakarana ny fanapahan-kevitry ny kolejy
Petra Kvitova Sary: Picture Gallery of Strokes
Fandikan-tenin'ny Baiboly: Battle Hymn of the Republic
Khotan - Renivohitry ny Fanjakana Oasis amin'ny lalana Silk any Sina